Ski Chalet Cabin eKanan Valley 35 -Inja Friendly - I-Airbnb
Ski Chalet Cabin eKanan Valley 35 -Inja Friendly
Ikhabhathi entle enedesika enkulu kunye nazo zonke izidalwa ezithuthuzelayo ukuze ziphumle entabeni. Bukela abantwana bakho kumhlaba wokudlala ukusuka kumgangatho okanye ubone umboniso omangalisayo esibhakabhakeni ebusuku njengoko ujonge iinkwenkwezi uqonda ukuba kutheni ziyibiza ngokuba yiMilky Way. Ipropathi ijikelezwe macala onke yiNdawo yokusabela yasendle kwaye unokujonga zonke iindawo zokuchithela iiholide ezintathu ukusuka kumgangatho ...
Ikhabhathi entle ebukekayo ecocekileyo efunwa ngabahlali beBlack Bear Resort. Iimbono zeNtaba ethandekayo kunye neNtlambo kwindawo enoxolo, yendalo engqongwe yiNdawo yokuKhuselwa kwezilwanyana zasendle. Le nto ifakwe ngokupheleleyo ngebhedi enkulukazi kwigumbi lokulala elikumgangatho ophambili kunye neebhedi zeBunk zabathathu kwigumbi eliphezulu. Iyunithi ibandakanya ikhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya, isitovu sefriji Indawo yokubasa iinkuni, i-cable tv, (eneRoku kunye nesidlali seDVD) Ukuba unqwenela ukusebenzisa iDVD vele ukhuphe i-roku kunye neplagi kwisidlali seDVD. I-WIFI, i-washer dryer, ukufikelela kunye nemibono yeendawo ezintathu zokuchithela i-ski, ezimbini ezihlayo kwilizwe elinqumlayo phakathi kweemayile ezi-5. Ngaphandle kweedolophu zembali zikaThomas kunye noDavis WV. Indawo ekuchithelwa kuyo iholide ngokwayo ibandakanya indawo yokulala ephambili enetafile yephuli, ibala yegalufa ye-putt putt, iphuli eshushu, iinkundla zentenetya ukubaleka/iindlela zokomelela, imingxuma yomlilo, idama lokuloba nokunye.
I-COVID-19 - Utshintsho: - Kude kube kuphinde kwabhengezwa kwakhona ndifuna isithuba seeyure ezingama-24 phakathi kogcino-ndawo ukuze ndicoce ngokufanelekileyo kwaye ndibulale iintsholongwane kwindlwana. Oku kukukhusela iindwendwe kunye nabasebenzi. Ungayishiya inkunkuma kwi-cabin xa ujonga ngaphandle okanye unokuchitha inkunkuma ngokuyifaka kwi-compactor yenkunkuma esemva kwe-Inn Suites endulini. Kuya kufuneka ujonge umgama ovela eluntwini, unxibe imaski xa ukudibana nabantu kungenzeki. Kuxhomekeka kumanqanaba osulelo ezinye iindawo zikawonke-wonke (ezifana nequla) zinokuba nemida ebekiweyo
4.74 out of 5 stars from 353 reviews
4.74 · Izimvo eziyi-353
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi353
Ubuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto kuwo onke amaxesha onyaka iiNgxangxasi zaManzi aMnyama, indawo yeDolly Sods Wilderness, ipaki yeCanaan Valley State, iTimberline Downhill ski resort, iCanaan Valley Downhill Ski resort, iTubing Hill eCanaan Valley resort, iziko lokhenketho laseCross country eWhite Grass. I-Sledding hill kunye ne-lift kwi-Blackwater Falls State park. Ukuhamba ngephenyane, ukukhwela inqanawa, ukukhwela iKayaking, ukuHamba intaba, izinto zakudala, ukhenketho lokuthengisa utywala, umculo ophilayo eThomas WV,
Ndihlala eDurham NC kwaye ndizama ukuphuma ndiye ekhabhathini xa ingasetyenziswa ziindwendwe zam